तपाईहरुलेपनि गल्ती त गरिरहनुभएको छैन ? यो समयको शारीरिक सम्बन्ध हो मायाको औषधि – Jagaran Nepal
काठमाडौं । नेपाली समाजमा धेरैजसो मानिसहरु राती शारीरिक सम्बन्ध मन पराउँछन् । तर तपाईलाई यो जान्दा अचम्म लाग्नेछ कि रातको सट्टा बिहान सम्बन्ध कायम गर्नु स्वास्थ्यको हिसाबले बढी लाभदायक मानिन्छ ।तपाईंको उत्पादकत्व कायम राख्न, दिनभरि काम गर्ने उर्जा प्राप्त गर्न बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाई के गर्नुहुन्छ ? जवाफमा सामान्यतया १ कप तातो चिया वा कफी पिउनुहुन्छ, मर्निङवाकमा जानुहुन्छ, योग गर्नुहुन्छ, पानी पिउनुहुन्छ वा हावा खाना बाहिर जानुहुन्छ ।
तर माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि कार्य नगरेर पनि तपाईं आफ्नो उत्पादकत्व बढाउन वा कायम राख्न सक्नुहुन्छ । सोच्दा केहि अच्चम लाग्ने भए पनि बिहानको समयमा सम्बन्ध कायम गर्दा तपाईंले धेरै लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
हो, एक राम्रो निद्रापछि, तपाईंको शरीर बिहान कसरतको लागि बिल्कुल तयार हुन्छ, यस अवस्थामा एक विवाहित जोडीको लागी भौतिक शुःख प्राप्त गर्दा हुने व्यायम पर्याप्त हुन्छ ।
बिहानको सम्बन्ध एक मध्यम कसरतको रूपमा रहेको छ । यसले तपाईंलाई एक सकारात्मक उर्जासंगै दिन को शुरुवात गर्ने मौका दिन्छ । तनाव पनि कम हुन्छ, जसकारण तपाईं दिनभरि सक्रिय महसुस गर्नुहुन्छ ।
राम्रो सम्बन्ध राख्दा क्यालोरी खपत हुन सक्छ र यो तपाईंको लागी लाभदायक हो । सन् २०१८ को एक सर्वेक्षणमा १००० योग्य मानिसहरुले भाग लिएका थिए, त्यसमध्य ५३ प्रतिशत मानिसहरुले बिहान सम्बन्ध कायम गर्दा आफुहरु दिनभरि ऊर्जावान भएको महसुस गरेको भनेका थिए ।
हो, बिहानको सम्बन्धले तपाईंको दिमागलाई सक्रिय बनाउँछ, किनकि यसले सम्पूर्ण शरीरमा हार्मोन उत्पादन गर्न थाल्छ । जसले तपाईंको दिमागलाई दिनको लागी तयार बनाउँछ । तपाईं हरेक चीजहरुमा अधिक ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम हुनुहुन्छ र धेरै कुराहरुलाई याद गर्न सकनुहुन्छ ।
रातभर आराम गरेपछि, शरीर बिहान उर्जाले भरिएको हुन्छ । यदि तपाईंले बिहान सम्बन्ध कायम गर्नुभयो भने शरीर अधिक हार्मोन बनाउन सक्षम हुन्छ ।
बिहान सम्बन्ध राख्दा फीलगुड केमिकल अक्सीटोसिन रिलीज हुन्छ, जसलाई मायाको औषधि पनि भनिन्छ । यसले सम्बन्धलाई अधिक रमाईलो र सन्तोषजनक बनाउनुका साथैं कामलिप्सा पनि बढाउँछ । यसकारण, उत्कृष्ट सम्बन्ध दिनभर जोडीहरुको बीचमा रहन्छ।
एक अनुसन्धानका अनुसार बिहान सम्बन्ध कायम गर्दा पुरुषहरुको जैविक तरल पदार्थको गुणस्तर १२ प्रतिशतले बढ्छ । विशेष गरी ति जोडीहरु जो गर्भधारणमा कठिनाई महसुस गरिरहेका छन्, उनीहरुका लागि बिहानको सम्बन्ध लाभदायक हुन्छ । बिहानको सम्बन्धले सन्तान बन्ने सम्भावना बढाउछ । भौतिक शुःखसँग सम्बन्धीत समस्याहरुबाट छुटकारा पनि पाइनेछ विज्ञहरुको दावा रहेको छ ।
भौतिक शुःखमा गरिएको अनुसन्धानका अनुसार, यो साबित भएको छ कि बिहान सम्बन्ध कायम गर्दा तनाव कम हुन्छ । त्यसले तपाईंको मुड दिनभरि राम्रो राख्छ । किनभने बिहान सम्बन्ध कायम गर्दा शरीरमा डोपामाइन र सेरोटोनिन हर्मोनहरु रिलीज हुन्छन्, जो तनाव कम गर्न सहयोगी हुन्छन् । जब मूड दिनभर राम्रो हुन्छ, तब यो कुरा त स्पष्ट छ कि काममा तपाईंको उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुन्छ ।
बेलफास्टस्थित क्वीन्स विश्वविद्यालयको एक अध्ययन अनुसार हप्तामा ३ पटक बिहान सम्बन्ध कायम गर्दा मुटु स्वस्थ रहन्छ । बिहान सम्बन्ध कायम गर्दा रक्त परिसंचरणमा सुधार हुन्छ, जसले रक्तचाप घटाउँछ, मुटुमा दबाब घटाउँछ, जसकारण तपाईंको मुटु स्वस्थ रहन्छ । यसबाहेक, बिहान सम्बन्ध कायम गर्दा माइग्रेनको समस्या पनि कम हुन्छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार सबैले बिहान सम्बन्ध राख्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
भौतिक शुःखसँग सम्बन्धीत चिन्ता एक सामान्य कुरा हो । यसको पछाडि तपाईंको शरीरको कुनै पनि समस्या जस्तै मोटोपन, उचाई र आकारको चिन्ता हुन्छ। शरीर बनावट सम्बन्धी समस्या तनाव र चिन्ताको सबैभन्दा ठूलो कारण हो । चिन्तापछि एक गम्भीर मानसिक समस्या बन्न सक्छ । किनभने दम्पतीहरु बिहान धेरै संवेदनशील हुन्छन्, यस समयमा सम्बन्ध गर्नाले आत्मीयता बढ्छ । यसको सहयोगले तपाईं आफ्नो चिन्ता बाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ ।
बिहान नियमित रुपमा सम्बन्ध कायम गर्दा न केवल तपाईं दिनभरि राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ, बल्कि यसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउँछ । यस्तो स्थितिमा, तपाईंको शरीर सामान्य चिसो, खोकी, चिसो, ज्वरो र फ्लूको खतरासँग भिड्न तयार हुन्छ । बिहान कुन समयमा सम्बन्ध राख्नु ठिक भन्ने कुरा त कतै उल्लेख छैन । तर बिहान सुर्योदयको समयमा हुने सम्बन्ध राम्रो हुने विश्वास गरिन्छ ।